Mpanonta Free Gimp Online
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Mpanonta Gimp amin'ny Internet
Ity Editor Online Gimp ity dia fitaovana natao ho an'ireo vao manomboka sy mpampiasa matihanina maimaimpoana safidy hafa amin'ny Photoshop. Mampiasà Gimp an-tserasera hiasa amin'ny rakitra RAW, amin'ny fampiasana sosona sy antoko fahatelo Plugins gimp. Amboary ny hoditra, esory ny pimples, ny mena, ny lesoka amin'ny maso mena ary manaova fanoratana miloko semi-automatique amin'ny alàlan'ity Gimp Online Editor maimaimpoana ity.
Ny Gimp Online Editor ve ny andiany feno an'ny Gimp?
Tsia, ity tonian-dahatsoratra ity dia natao ho an'ireo mpampiasa vao mila mila manova sary haingana dia haingana sy mamoaka sary amin'ny media sosialy.
Afaka manao retouching sary matihanina ve aho?
Azonao atao ny manarona pimples, manala ny maso mena, manafotsy nify na manova ny endrika bika mihitsy aza. Fa raha manomana sary ho an'ny famoahana amin'ny gazety na pirinty malaza ianao, dia ampirisihako ianao fanovana sary outsource FixThePhoto.
Azoko atao ve ny manafatra ny plugins amin'ity Editor Gimp Online ity?
Eny, ity safidy Free Gimp Online ity dia manohana ny plug-in an'ny antoko fahatelo izay zatra hitanao Gimp na Photoshop. Anisan'izany ny matihanina Borosy Photoshop, Photoshop hetsika, Overlay Photoshop ary na dia Kitapo Photoshop.
Maninona aho no tsy afaka mampakatra sary mihoatra ny iray?
Ity Gimp Online Editor dia tsy manohana ny fanovana andiany. Azonao atao ny mampakatra sary tsirairay ary manitsy azy ireo amin'ny varavarankely samihafa, toy ny amin'ny Gimp Desktop Version.
Gimp Online - Trick video